Ukufika okutsha kweFashoni yokufudumeza ebusika ngokuQhelekileyo kwesiQinisekiso seSikhumba seMoccasins kwabasetyhini-iGoodao Technology Co, Ltd.
Ukufika okutsha kweFashoni yokufudumeza ebusika ngokuQhelekileyo kwesiQinisekiso seSikhumba seMoccasins kwabasetyhini
Umzekelo NO. NumBLM1291
Kuyinyani kubungakanani-Sihlaziyekile esi sisiliphu kwaye sawulungisa umba wobungakanani, nceda ukhethe ubungakanani obuqhelekileyo.
Uhlobo lweClassic-Isiliphu se-moccasin sabasetyhini esine-whipstitch ephezulu kunye ne-cowuede ephezulu yenza ukuba indlu ibe nesitayile kunye ne-chic. Iiziliphu ezinobunzima ezinesithende esivaliweyo sangasemva zikuvumela ukuba uhambe ungazami kwaye uzinze, ngakumbi xa unyuka / usiya ezantsi.
Intuthuzelo yoQeqeshiso -Ixhonywe ngegwebu lememori elinoxinizelelo oluphezulu, isiliphu esibunjiweyo kwiinyawo zakho zenza eyona nto ilunge kakhulu. Isiponji esixhasayo esinee-Multi-layer kunye ne-EVA insole zibonelela ngokunyanzelwa kunye nokufunxa ukothuka ukunciphisa ukudinwa kwezihlunu kwaye zikwenze ukhululeke ngokwenyani.
Ithambile kwaye iyaphola-Igwebu elinamagwebu atyibilikisiweyo ngombala wefayin kunye ne-cuff zigqume iinyawo zakho, zihlala zifudumele kwaye zikhululekile, ziphumza iinyawo zakho. Kwangelo xesha, i-suede yesikhumba ephefumlayo eguqukayo igcina iinyawo zakho zintsha kwaye zomile.
Izinto eziHambelanayo zeNdlu yezihlangu -Ngokuhlala ixesha elide ngaphandle kokutyibilika kwirabha, ezi zihlangu ze-moccasins zingaphezulu kweslippers eziqhelekileyo zasekhaya. Ungatyibilika kwezi tafile ngokukhululekileyo ekhaya okanye inyathelo ngaphandle kwendlu ukujonga ibhokisi yeposi, ukunkcenkceshela ingca, ukuhamba nenja okanye njengezihlangu zokuqhuba ngaphandle kokutshintsha izihlangu.
● I-moccasin slippers yabasetyhini
● Inkumbulo amagwebu ebhedi kunye ne-anti-slip TPR yodwa
● Ukusetyenziswa kwangaphakathi nangaphandle
● Sivelise izinto ezi-Upper & lining zale ndlela.
● Umsonto ujikeleze i-vamp eyenziwe ngezandla. Ngomtya wesikhumba obotshwe kwi-vamp.
Egqithileyo I-Classic Women Cowsuede Clog Slipper ekuMgangatho oPhezulu weNtuthuzelo yeenyawo
Okulandelayo: Izicathulo zeWms Leather Shoes Comfort Fuax Fur Slipper
Izihlangu zegumbi lokulala eMoccasin
Izihlangu zeMoccasin Slipper
Abafazi abaqhelekileyo beCowsuede Clog Slipper High Qualit ...